Kungani ngidinga yegilo ultrasound?
Zonke ijwayeleke kakhulu zokwelapha, abanale nkinga, futhi bangayiqonda hhayi kuphela abantu asebekhulile, ezibhekwa, kodwa futhi ngempela abasha futhi ebonakala egcwele amandla namandla. Izimbangela isifo esihlasela umzimba, impela eningi, omunye ezivamile kuyinto ukuntuleka kwe-iodine emzimbeni. Ukuze ukuqaphela isikhathi futhi ubone lesi sifo ngo ukusebenza endlaleni engasesinyeni Kunconywa ukuba wenze ultrasound yendlala, inqubo ephephile, kodwa ngempela ulwazi lomisiwe ngezinhloso zokuxilonga.
Ucwaningo, ezimweni eziningi, inikezwa i endocrinology, uma isiguli noma iziphi izimpawu eziyisixwayiso. Lezi zingozi zihlanganisa ama ukukhathala anda, ukucasuka, liqhaqhazela, iyehla iyenyuka elibukhali isisindo, ukuvuvukala emqaleni. Ngakho, yegilo ultrasonography ivumela kakhulu ukuxilonga ngokunembile izimila kanye ISIZINDA (uma ikhona), izinguquko sokugembula zomzimba, noma ukuvuvukala.
Ukuze isifundo, isiguli ibekwe emhlane wakhe, futhi ibekwe umcamelo ekhethekile ngaphansi entanyeni yakhe. Region, okuyinto kufanele kucwaningwe ngokubandakanya, ijeli ekhethekile lenzelwa, kodwa lapha izinzwa benzelwe, nge okuyinto kungenzeka ukuthatha izithombe. Ngakho, ukwenza i-ultrasound shchitovidki kuyinto inqubo lula futhi ngokuphelele kobuhlungu, ukusebenza kahle Kuhlolisisa, ngaleyo ndlela, eliphezulu kakhulu. izindlela zesimanje uphenyo ngosizo ultrasound ukugwema izifo zamanga nemibono womuntu ongabazisayo. Phela, kusukela impilo yomzimba kuncike ngqo isimo somuntu sokujikeleza hormone.
Abantu abahlala ezindaweni ezingaphephile imvelo noma zezimboni, yegilo Kunconywa ukwenza okungenani kanye ngonyaka-masinya izinguquko sokugembula ukuthi ezingelapheka. Futhi ngokuvamile Ukuqondiswa kule nqubo abesifazane kokuba abanye iziyaluyalu izifo zabesifazane ezifana mastopathy, i-endometriosis, ukungazali. kungenzeka Ochwepheshe inikezwe yegilo ultrasound kwabesifazane abakhulelwe, ikakhulukazi uma cwaningo hormone ngibonise noma yikuphi ukulangazelela ukuphambuka kusuka kuyinsakavukela.
Singayinaki inqubo uma kutuswa ukuba nguchwepheshe akudingekile, ngisho noma azikho izimpawu ukuthi ibakhathaze futhi ukhuluma ngani izinkinga emsebenzini walo mzimba. The main ultrasound yegilo value, kwenziwa ngezinhloso ukukhalima, ukuthi kukhona kungenzeka ukufaka ngisho izinguquko ezincane, njengokuhleleka Izigaxana ezincane, okuyinto wenziwa belulekwa i endocrinology ayikwazi ukutholwa palpation, futhi bangakwazi ukukhonza njengomdala uphawu isifo esiyingozi ngaphezulu noma isimo precancerous . Ukuze sicacise uphethwe kungadinga ucwaningo olwengeziwe: biopsy, nabanye. Uma ukuhlolwa ngakususi Oncology, ngosizo ultrasound luhlolo kukhona ukulawula okuthuthukile we ngamaqhubu.
Ukuze US indlala yegilo, ngokwanele isicelo umtholampilo emphakathini noma umtholampilo yangasese, kanye nenani lentengo lesevisi, ezikhathini eziningi okusezingeni eliphezulu kuqhathaniswa nezinye zokwelashwa, zihlose ukuthola izimbangela zokugula. Izimo futhi side effects emva inqubo lapho, kuhlanganise, kunconywa ukuthi, ezimweni eziningi, futhi ukhulelwe. Ngemva kokufinyelela eminyakeni ewu-40, futhi uma kukhona umphumela njalo emzimbeni izinto eziyingozi (isib emisebeni) inhlolovo senzeka ngonyaka. Lokhu akususi, ngokuvamile, isikhathi esiningi, futhi isikhathi angahlangani kuzosiza sigweme izinkinga enkulu ngokwanele esinempilo nekusasa eliqhakazile.
№ Polyclinic 151 (Glider Street): Ochwepheshe, ngocingo, udokotela ku akuvakashele ekhaya. Polyclinic № 151 legatsha № 3 № GP 219
Yini TK kwegazi-hormone?
Hemostasiogram: ukuthi kuyini, indlela qeda kulungiswa ukusebenza
Isifuba esomile: Izimbangela
Thuja occidentalis Golden Globe: incazelo, izici kulinywe
Motorcycle Honda Transalp: Ukucaciswa, izithombe kanye nokubuyekeza
Andzhelina Dzholi amabele isusiwe. Ukugula u-Angelina Jolie
Isethulo ngempumelelo izimpahla
Fokina Olga Aleksandrovna: Biography, izinkondlo